Wada-hawlgalaha on Twitch Sidee Loo Helaa? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Wadaage on Twitch Sidee loo helaa?
Waxaa laga yaabaa 7, 2021 0 comments 462
Lamaane ku sugan Twich waa kuwaa wariyeyaasha abuura waxyaabo badan sida wareysiyada, sawirada, muusikada, ciyaaraha, bandhigyada, farshaxanka oo ay ku mashquulsan yihiin baahinno si ay u heer dhigaan kuwa ku xiran.
Barnaamijka iskaashiga ee twich Waxay kula wadaagi doontaa dakhliga ku soo gala xayeysiintaada waxayna ku siin doontaa iyadoo loo eegayo tirada dadka raacsan iyo booqashooyinka lagu sameeyo kanaalkaaga. Faa'iidada ay Twich ku siineyso lammaane ahaan waa inay u qaybin doonto faa'iidada diiwaan kasta oo isticmaale.
Shuruudaha looga baahan yahay inaad lammaane ku noqoto Twich.
Ku noqo lammaane Twich oo geli barnaamijka ku-xirnaanta.
Waad ubaahantahay xarig 12 maalmood dhammaantood ka dhig dhammaadka bisha.
Baahin ugu yaraan muddo 25 saacadood ah muddo bil ah.
Leedahay sida celcelis ahaan daawadayaasha 75 dhamaadka bisha.
Gudbinta ugu yaraan 3 maalmood toddobaad
Waxyaabaha ku jira waa inay ahaadaan tayo iyo badeecado gaar ah oo u hoggaansamaya Twich DMCA Tilmaamaha iyo Shuruudaha Adeegga.
Talooyin ku saabsan helitaanka lammaanaha
Si aad u hesho lammaane Twich Shuruudaha ayaa dalbanaya sababtaas awgeed waxaan sameyn doonaa talooyinka soo socda:
Diirada saar yoolalka yaryar: ujeedku waa in si tartiib tartiib ah loo gaaro tiro daawadayaal ah, sidaasna ay dhagaystayaashaadu kula soo biiri doonaan waxaadna heli doontaa taageerada aad ku gaarto hadafkaaga ah 75 daawade.
· Tayada Channel: Waa inaad hagaajisaa muuqaalka iyo tayada kanaalkaaga, halka ay tahay inaad hubiso:
Waa inaad leedahay is-dul-saar ka dhig mid ka dhex muuqda indhaha bulshadaada.
Qor sharaxaad aad u fiican qofkaaga ku jira astaanta guud.
Habee emotes oo matalaya astaanta kanaalkaaga iyo bulshadaada.
Dammaanad wanaagsan dhawaq iyo sawir weyn markii la baahinayo.
· Ku qulquli madadaalo iyo waxyaabo madadaalo leh: Waxa aad ku gudbiso adoo ka kooban waxyaabo wanaagsan waxay soo jiidan doonaan dhagaystayaal cusub kanaalkaaga oo sidaas ku kordhinaya bulshadaada Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad sameyso:
Waa inaad hal abuur yeelataa, hal-abuure ka kooban illaa aad ka heshid waxa dhagaystayaashaadu runtii jecel yihiin oo ay u arkaan in baahintaadu ay tahay waxa ay iyagu doonayaan, tani waxay ka dhigeysaa dhagaystayaashaada inay koraan.
Samee wax bixin ah kaliya adoo ciyaaraya, abuuraya ciyaaro cusub kana qaybgala dhageystayaashaada, sidaasna ku kordhinaya bulshadaada.
Had iyo jeer wada hadal oo aad la macaamisho dhagaystayaashaada.
Bulsho abuur: ku ilaali bulshadaada waxqabadyo kala duwan, xamaasad leh, madadaalo leh, inay dareemayaan inaad markasta goobjoog tahay oo markii aad aragto ay xamaasad yeeshaan. Waxaad ku dhaqaajineysaa dhagaystayaashaada adoo adeegsanaya shabakadaha bulshada oo waxaad ku abuureysaa sheeko ku saabsan server khilaaf ah si ay ula falgalaan oo ay si fiican kuu bartaan.
Ma waayi kartaa lammaanahaaga Twich?
Markay kuwa soo socda dhacaan:
Hadaadan u hogaansamin xeerarka iyo shuruudaha barnaamijka lammaanaha.
Haddii twich ku xaddido inuu sii wado baahinta.
Markii lagaa mamnuuco joogto ah.
Markaadan haysan xaqiijinta la-hawlgalayaasha iyo mudnaanta.
Al iskutallaabtoodu khadka.
1 Shuruudaha looga baahan yahay inaad lammaane ku noqoto Twich.
2 Talooyin ku saabsan helitaanka lammaanaha
3 Si loo helo lammaane Twich, shuruudaha ayaa dalbanaya sababtaas awgeed waxaan sameyn doonaa talooyinka soo socda:
3.1 Tayada kanaalka: Waa inaad hagaajisaa muuqaalka iyo tayada kanaalkaaga, halkaasoo ay tahay inaad ka hubiso:
3.2 · U gudbi madadaalo iyo madadaalo: Waxa aad ku gudbiso adigoo ka kooban waxyaabo fiican waxay soo jiidan doontaa dhagaystayaal cusub kanaalkaaga sidaasna bulshadaada ku kordhinaysa. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad sameyso:
4 Ma waayi kartaa lammaanahaaga Twich?
Sidee TikTok loo cusbooneysiin karaa?
Sidee loogu sii qulqulaa Twitch oo leh OBS?